विदेशमा प्रकाशित पुस्तकमा लगाउने कर उचित छ: मुद्रण संघ रूपन्देही | Boli Dainik
बुटवल । मुद्रण उद्योग संघ रुपन्देहीले पुस्तकमा लगाएकाे कर हटाउने मन्त्रीपरिषद्काे निर्णय सच्चाउन अनुराेध गरेकाे छ ।
संघले हिजाे प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने नीति पास भएपछि नेपालका मुद्रण व्यवसायीले राहतकाे महशुस गरेकाेमा पछिल्लाे मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले भन्सार करमा छुट दिने निर्णयले स्वदेशी उद्याेगलाई धरासायी बनाउने बताएकाे छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदकाे कार्तिक २४ गतेकाे बैठकले विदेशमा छपाइ गरेर ल्याउने पुस्तकमा लगाउने १० प्रतिशत भन्सार कर हटाउने निर्णय गरेकाे थियाे ।
सरकारले प्रकाशन सम्बन्धी कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत् कर र भ्याट १३ प्रतिशत् गरी २८ प्रतिशत्सम्म कर ठोकेपछि कसरी नेपालका मुद्रण व्यवसायले प्रगति र उन्नति गर्न सक्लान् ? विदेशबाट आएका प्रकाशित सामग्रीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला ? त्यसैले कच्चा पदार्थमा लगाइएको कर सरकारले खारेज गर्नुपर्छ र स्वदेशी प्रकाशकले छपाई ल्याएका प्रकाशित सामग्रीमा भन्सार महसुल वापतको १० प्रतिशतलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन नहुने भन्दै रुपन्देही मुद्रण उद्योग संघको आयोजना र मुद्रण व्यवसायीहरुको संलग्नतामा कार्तिक २८ गते शुक्रवार विहान ११ः३० देखि मध्यान्ह १२ वजेसम्म पुष्पलाल पार्कमा व्यानर र प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन र सवा १२ वजे लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेकाे छ ।
नेपालमा मुद्रण व्यवसाय सञ्चालनछि स्थानीयहरुले रोजगार पाएका छन् । व्यवसायीहरुले आफ्नो लगानी सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरेका छन् । उपभोक्ताहरुको मागलाई छिटो छरितो सम्पादन गरी मुद्रण गरिएका सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएका छन् । राज्यलाई मुद्रण व्यवसायीहरुले सक्दो कर भुक्तान गरेका छन् । यो एकहदसम्मको सकारात्मक कार्य हो ।
नेपालमै उपयुक्त छपाइ मेसीन,दक्ष कारिगरहरु,उत्तम व्यवस्थापन हुँदाहुँदै पनि खोइ के कारणले हो ( सायद कमिसन हुन सक्छ ! ) छपाइका लागि नेपाल बाहिर पठाउने चलन आएको छ । यसका लागि सरकारले नेपालभित्रका प्रकाशकहरुले विदेशमा छपाइ ल्याएका पुस्तकमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत् लगाउने निर्णय गरेकोमा नेपालका मुद्रण व्यवसायीहरुले खुसी व्यक्त गरेका थिए । भरखरै अर्थमन्त्रालले गरेको निर्णयमा समेत सो कायम गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले भनेको छ– १० प्रतिशत् भन्सार महसुल छुट विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेका पुस्तक आयातको हकमा मात्र लागू हुने भएको छ । तर यसको ठोस ग्यारेन्टी नभएसम्म विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने रुपन्देही मुद्रण उद्योग संघले जनाउँदै आएको छ ।
जंगबहादुर राणाले बेलायतबाट गिद्दे प्रेस नेपालमा भित्र्याएपछि नेपालमा मुद्रणको काम सुरू भएकाे इतिहास भेटिन्छ । नेपालमा छपाइ सम्बन्धी पछिल्लो समयमा दु्रतर विकास भए तापनि सही व्यवस्थापन र राज्यबाट सहयोग मिल्न नसक्दा मुद्रण व्यवसायमा असर परेकाे व्यवसायीहरूले गुनासाे गरेका छन् ।
नेकपाको एकीकृत अस्तित्वमा गम्भीर संकट: महासचिव पौडेल
बोली दैनिक - 11/01/2020 0